मेसीको चाहनामा कुन खेलाडी ? जोसँग उनी सँगै रहेर खेल खेल्न चाहन्छन् - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
मेसीको चाहनामा कुन खेलाडी ? जोसँग उनी सँगै रहेर खेल खेल्न चाहन्छन्
Posted by Milap Subedi | ९ चैत्र २०७३, बुधबार १८:५९ |
९ चैत, काठमाण्डौँ । सुपरस्टार लियोनल मेसीसँगै बार्सिलोनाबाट खेल्ने रहर धेरै नामी फुटबलरहरुलाई छ। धेरै फुटबलरहरुले मेसीसँगै फुटबल खेल्ने आफ्नो चाहना सार्वजनिक गरेका छन्। तर मेसीको चाहना के छ त ? उनी कुन खेलाडीसँगै रहेर एकसाथ खेल्न चाहन्छन्।
च्याम्पियन्स लिगमा पनि बार्सिलोनाले यस सिजन निकै उत्कृष्ट खेलेको छ। तर बार्सिलोनाका स्टार लियोनल मेसी अझै टोलीमा परिवर्तन चाहन्छन्। उनले नयाँ सम्झौता गर्नेमा क्लब ढुक्क देखिएको छ।
मेसी आफ्नो सम्झौताभन्दा पनि अन्य खेलाडीको सम्झौताको विषयलाई लिएर चर्चामा छन्। मोनाकोका केलियन म्वाप्पे र बर्नान्डो सिल्भाबाट मेसी प्रभावित भएका छन्। एक्सप्रेस डट यूकेले उनीहरुलाई क्लबमा भित्र्याउन मेसीले प्रयास गरिरहेको समाचार छापेको छ।
बोरुसिया डर्टमुन्डका ओसमाने डेम्बेलाई पनि मेसीले बार्सिलोना ल्याउन चाहेको समाचारमा जनाइएको छ। त्यस्तै आर्सनलका हेक्टर बेल्लरिनबाट पनि मेसी प्रभावित छन्। बार्सिलोनाले यी खेलाडीलाई क्लबमा भित्र्याउने हो भने अहिले क्लबमा रहेका केही खेलाडीहरुलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
२९ वर्षका मेसी चाहन्छन्, आन्द्रे गोमेज, पाको अल्कासर र एड्रा टुरानले क्लब छाडुन्।
Previous‘कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण हुने हल्ला निराधार हो’ : गच्छदार
Next‘नेपाल भारत सम्बन्ध अझ भाँगिन्छ’ – मोदी
युवा निर्देशक सागरको नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा आउने
२५ असार २०७४, आईतवार १८:४०
रसुवामा विद्युत सेवा अवरुद्ध,बेलुकासम्ममा विद्युत सेवा सञ्चालन हुनसक्ने
१८ असार २०७३, शनिबार ११:३१
पुनःनिर्माण शुरु भएका घरको सख्यां ५ लाख भन्दा बढि, नीतिगत सुधारका कारण पुनःनिर्माणमा तीव्रता
१६ असार २०७५, शनिबार ०९:२६
वर्षाले महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्यो, चारपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक
२३ असार २०७४, शुक्रबार १०:२०